Dareenka faraha ee Galaxy S11 ayaa ka weynaan doona jiilkii hore | Androidsis
Maaddaama taariikhda soo bandhigida jiilka cusub ee Galaxy S ay soo dhowaanayaan, xanta la xiriirta qalabkan ayaa sii kordheysa. Xanta ugu dambeysa waxay la xiriirtaa dareeraha sawirka faraha ee lagu dhex daray shaashadda terminal-kan, aaladda sawirka faraha Waxay kaa caawin doontaa in dhaqso loo ogaado baaritaanka faraha.
Qualcomm waa soo saaraha ka dambeeya soosaarka aaladda dareeraha ultrasonic ee hadda ka hooseysa shaashadda S10, S10 + iyo Xusuusin 10. Shirkaddan Mareykanka ah ayaa ku dhawaaqday a nuqul labaad oo la yiraahdo 3D Sonic Max (Midka aan ka helno jiilka hadda jira S10 waxaa lagu magacaabaa 3D Sonic Sensor).
Sawir-qaadahaan cusub ayaa u oggolaan doona dadka isticmaala inay iska wada baaraan laba farood si amniga loo adkeeyo. Aagga aqoonsiga ee dareemayaasha cusub ayaa 17 jeer ka weyn marka loo eego jiilkii ugu horreeyay, taas oo u oggolaan doonta aag ballaaran in loo isticmaalo in lagu dhigo faraha oo lagu furo terminalka.
Marka lagu daro cabirka sensosaxsanaanta r ​​ayaa iyana kordhay oo sii wadaysa inay bixiso qiyaas sax ah oo ah 1 milyankiiba marka la barbar dhigo saxnaanta jiilkii ugu horreeyay oo ah 1 kii 50.000.
Samsung hadda waa kaliya soo saaraha casriga ah si uu u isticmaalo dareeraha Xiinka ee Qualcomm, markaa waxay u badan tahay inay sidoo kale adeegsan doonto jiilkan labaad, jiilka labaad oo aad uga dhameystiran kana amni badan kii hore (wax aad ugu badan aalad kasta oo elektaroonig ah).
Nooca dareemayaasha, ultrasonic, way ka dheereysaa akhristayaasha indhaha in aan ka heli karno boosteejooyinka oo sidoo kale bixiya dareeraha faraha ee shaashadda hoosteeda. Sida laga soo xigtay falanqeeyayaal kala duwan, Apple sidoo kale waxay hirgelin kartaa dareemahan cusub jiilka soo socda ee iPhone ee bilaabi doona sanadka soo socda, inta u dhexeysa soo gelitaankeeda Apple ee iPhone.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Dareenka faraha ee Galaxy S11 ayaa ka weynaan doona jiilkii hore